Saddex qof oo lagu dilay weerar ka dhacay ISRAEL - Caasimada Online
Home Dunida Saddex qof oo lagu dilay weerar ka dhacay ISRAEL
Saddex qof oo lagu dilay weerar ka dhacay ISRAEL
Tel Aviv (Caasimada Online) – Wasaaradda Caafimaadka Israel oo war bixin soo saartay ayaa sheegtay in 3 qof oo yahuud ah lagu dilay weerar ka dhaca Magaalada El’ad oo u dhow Magaalada Tel Aviv.
Warbixinta kasoo baxday wasaaradda caafimaadka ayaa kusoo aadeysa xilli booliska Israel uu ku sifeyey weerarkaan inuu ahaa mid lasoo qorsheeyey, mana ka hadlin saraakiisha booliska khasaaraha ka dhashay weerarkaas.
Booliska ayaa ku hanjabay inay jawaab kulul ka bixin doonaan weerar lagu soo qaaday dadka Yahuud ah ee ku sugan dhulka reer Falastiin ee xoogga lagu heysto.
Kooxda Xamaar oo kamid ah kooxaha ka dagaalamo gudaha Falastiin ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka, wuxuuna ururka sheegay in looga jawaabayey dhibaatada ay booliska Israa’iil ka wadaan Masjidka Barakeysan ee Al-Aqa oo ku yaala Magaalada Qudus.
Warka kasoo baxay Xamaas ayaa lagu sheegay in weerarkaan khasaaro xooggan oo dhimasho iyo dhaawac ah lagu gaarsiiyay Israel.
Ssarkaal ka tirsan kooxda Xamaas ayaa tilmaamay in todobaadyadii tagay weeraro kala duwan ay kooxdu geysatay, isla markaasna ay weli qorsheeneyso weeraro badan inta Israa’iil laga saarayo dhulalka ay xoogga ku qabsatay.
Ciidamada Booliska Israa’iil ayaa Bishii soo dhammaatay ee April oo ku beegneyd bishii barakeysneyd ee Ramadan waxay dhibaato xoog leh ka geysteen masjidka Aqsa taasoo keentay inuu dhasho kacdoon ay sameenayeen shacabka Falastiin.